Shiinaha Oo Bedelaya Cirbadda Dhaqameed Iyo Mashiinka Dunta 20Khz Mashiinka Alxanka Xiinka Loogu Tala Galay Soosaarka Dharka Qalabka Warshadaha & Warshadda | Qianrong
Beddelista Cirbadda Dhaqameed iyo Mashiinka Mashiinka 20Khz Xiinka Mashiinka Xiinka ah ee loogu talagalay Dharka Thermoplastic
Shayga No QR-S20DL
Ballaadhka shaagagga alxanka 22mm
Transducer isku aaddan 5020-4D PZT4
Cabbirka koronto-dhaliye 400 * 195 * 98mm
Xudunta mashiinka dharka tolida ah ee Ultrasonic ayaa toli kara inta badan dharka kuleylka leh. Marka la barbardhigo irbadda caadiga ah iyo tolidda dunta, tolidda Xiinka uma baahna irbad iyo dun, xoog tolidda tolidda, xiritaanka wanaagsan iyo xawaaraha tolidda dhaqsaha leh. Iyo tolida ultrasonic oo aan kala go 'lahayn waxay gabi ahaanba xallineysaa dhibaatada in jihada dhaqdhaqaaqa ee madaxa alxanka ultrasonic uusan waafaqsaneyn jihada dhaqdhaqaaqa ee dharka, iyo dhibaatada iswaafajinta la'aanta waxay beddeli doontaa mashiinka tolida caadiga ah illaa heer aad u weyn.
Faa'iidooyinka tolida aan xuduud lahayn
1. Xasilooni sare: Mashiinka alxanka iyo giraanta cadaadiska ayaa si isku mid ah isku shaandheyn ku sameeya inta lagu jiro ultrasonic tolida aan kala go 'lahayn, ma jiro farqi u dhexeeya xawaaraha iyo xagasha, mana keeni doonto kala bixid, dhalanrog ama qallooca dharka, taas oo ah mid aad u sax ah. Waad ku mahadsan tahay saameynta dhalaalka kulul, looma baahna in la isticmaalo dunta cirbadda, badeecaddu waa biyo la'aan badan, fudud oo fudud.
2. Alxanka iyo goynta iswaafajinta: Qalabka tolida oo aan xaddidneyn ee Ultrasonic kuma haboona kaliya tolmo joogto ah, laakiin sidoo kale wuxuu jari karaa dharka markii la alxamayo, oo wuxuu garwaaqsanayaa faashad toos ah
3. Ma jiro shucaac kuleyl ah: Tamarta ayaa dhex galeysa lakabka walxaha ee alxanka inta lagu jiro tolida ultrasonic, mana jiro shucaac kuleyl leh. Inta lagu jiro tolida joogtada ah, kuleylka looma wareejin doono badeecada, taas oo si gaar ah faa'iido ugu leh baakadaha alaabooyinka kuleylka u nugul.
4. Mashiinka alxanka koontorooli kara: Dharka waxaa jiidaya giraangirta alxanka iyo rullaluistemadka cadaadiska, iyaga oo dhex maraya, maradaasna waxaa ku xiraya mowjado ultrasonic ah Adiga oo beddelaya rullaluistemadka cadaadiska, cabbirka xajmiga alxanka iyo soo-saaridda waa la beddeli karaa.
5. Baaxad ballaaran oo codsiyo ah: Dhammaan qalabka 'thermoplastic' (oo la jilciyey ka dib markii la kululeeyay) maryaha, cajalado gaar ah, iyo aflaamta ayaa lagu dhejin karaa iyadoo la adeegsanayo qalabka tolmada ee aan xuduudda lahayn ee ultrasonic, rollerskuna wuxuu ka samaysan yahay bir adag oo adag si loo kordhiyo nolosha adeegga.
Hore: 20Khz Xiinka Mashiinka Alxanka Qalabka Qalabka Qalabka
Xiga: Joogto Joogto ah 35Khz 1000w Qalabka Xiinka Xiinka ee Dharka Qalabka Tamarta